Leanplum: A / B Edza Yako Nhare Yemukati uye Meseji | Martech Zone
Kugadzira uye kuendesa mafoni ekushandisa kunogona kunetesa, kushandisa zviwanikwa uye kunetesa maitiro emakambani. Kungo tora mvumo kubva kuApp Store pane dzimwe nguva kungave kusununguka, usambofa wakazvifunga nekugadzirisa yako nharembozha. Uye kana iwe ukaona kuti kune mikana yekunatsiridza kana kusimbisa iyo app, zvinowanzoreva kuwedzera kuwedzera uye kusunungurwa kutsva. Kune dzimwe nzira kunze uko, zvakadaro.
Leanplum iri izere-yakasanganiswa yekugadzirisa mhinduro yemafoni maapplication kubatsira makambani mukutumira nharembozha kwavanogona kuyedza, kuongorora, kuronga uye kugadzirisa ruzivo rwevashandisi nekutumira mameseji.
Leanplum Platform inobvumidza Kugadzirisa, Kuedza uye Kugonesa
Mobile App A / B Kuedzwa - Zvemukati mekuyedza, mishandirapamwe yekutumira mameseji, zvinhu zvinoonekwa, uye UI pane-iyo-nhanho yekumisikidza ruzivo rwevashandisi mbozha nekuyedza kwenguva-iyo isingade kuitiswa kweApp Store. Mushandisi anogona kunyorera kuyedzwa kune zvikamu zvevatengi uye kunongedza A / B bvunzo inoenderana nejogirafi, mhando yedhizaini, vhezheni yeapp, traffic sosi, hunhu hwevatengi, zvido, zvaunofarira uye maitiro e-e-app.
Nzvimbo Yepamhepo Management - Gadzirisa uye kushambadzira zvemukati zvemukati zvine simba zvinoenderana nehunhu, huwandu hwevanhu, nzvimbo uye zvimwe hunhu. Sync, chitoro, uye kuendesa nharembozha mune chaiyo-nguva, nekuchengetedzwa kwakabatana, kuyananisa, uye rutsigiro rwepamhepo. Regedza maficha matsva pasina chikonzero chekutumirazve kuApp chitoro uye rakabatanidzwa refaibhurari. Izvi zvakare zvinosanganisira inoshanduka dhata modelling API.
Nhare Yekushambadzira Yekushandisa - Gadzira, gadzira, uye bvunzo yakanangwa nharembozha mu-app mameseji uye pusha zviziviso kugadzirisa mushandisi kubatanidzwa, chengetedzo uye brand kuvimbika Pamwe chete neA / B kuyedza mameseji, iwe unogona kugadzirisa mameseji uye kuvhura mishandirapamwe mune chaiyo-nguva, kana kugadzira yakatarwa nguva- uye chiitiko-chakakonzera chinokonzeresa.
Mobile App Ongororo - ongorora data zvichienderana nemaitiro apfuura, rudzi rwechigadzirwa, jogirafi, sosi yemigwagwa, uye hunhu hwevashandisi. Gadzira mafirina ekushandurwa, chidimbu chakavakirwa pamaitiro kana nguva, uye tarisa zvakajairwa metric
Tags: leanplumnharembozha app ab kuyedzanharembozha app analyticsnharembozha app analytics funnelsnharembozha app maitiro analyticsnharembozha yeappnharembozha app zvemukati optimizationnharembozha app zvine simba zvemukatinhare mbozha nharaunda inonongedzanharembozha app kushambadza otomatikimobile app mamesejimobile app metricsmobile app optimizationnharembozha app yakasarudzika zvemukatinharembozha app chaiyo-nguva kuyedzwanharembozha app kuisazvenharembozha app chidimbunhare mbozha kunongedzeramobile app kuyedzanhare mbozha yakamutsa mamesejimobile kuyedzwa